सिन्धुपाल्चोकको उपनिर्वाचन ः नेपाली कांग्रेसलाई साख जोगाउने र नेकपालाई साख बढाउने चुनौति | Sindhu Jwala
नवलपुर (सिन्धुपाल्चोक), उपनिर्वाचनको लागि मंसिर १४ आउन मात्र अब एकसाता बाँकी छ । जिल्लाको ईन्द्रावती गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर ८ को चुनावी रौनकता यतिबेला ह्वात्तै बढेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने उक्त गाउँपालिका–८ मा सबैको चासो बढेको हो । प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रदेखि जिल्ला नेतृत्व सम्म मतदातालाई फकाउन लागि परेका छन् ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा उक्त वडामा धनबहादुर श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट वडाअध्यक्ष जितेका थिए । उनका प्रतिद्वन्दी पूर्व माओवादीकेन्द्रबाट केदारनाथ आचार्यले मात्र ९ मतको अन्तरले पराजित भएका थिए । वडाअध्यक्ष जितेका धनबहादुर श्रेष्ठको निधन भएपछि सो वडामा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यस उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट उम्मेदवार बनाईएका आचार्य पुनः मैदानमा भिडेका छन् भने कांग्रेसबाट राले तामाङ ’अशोक‘ भिडेका छन् । कांग्रेसले आफुले जितेको क्षेत्र हुनाले सोही जितलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने नेकपा यसअघि पालिकाभरिको आफ्नो बर्चश्वलाई अझ बढवा दिन चाहान्छ । किनकी वडा जितेको हिसाबले नेकपा अब्बल छ । कांग्रेसले गाउँपालिकाभरी जम्मा चारवटा सिट मात्रै जित्न सफल भएको थियो । बाँकी पाँचवटा नेकपाको छ ।
वडाध्यक्षमा मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा र कांग्रेससहित पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको भएपनि दुई ठूला पार्टी मात्रै प्रतिश्पर्धी देखिन्छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार नेकपाबाट केदारनाथ आचार्य र कांग्रेसका राले तामाङ (अशोक), संघीय समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश श्रेष्ठ, राप्रपाका रणबहादुर तामाङ र राप्रपा (संयूक्त) का ढकबहादुर श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यो वडामा एक हजार ४४ मतदाता छन् । गणितीय हिसाबले हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेकपा उम्मेदवार दुईसय मतले माथि छ । थप राप्रापाको समेत केही मत लिएर बहुमतले जित हाँसिल गर्ने नेकपाको उद्देश्य छ । उता कांग्रेसले जसरी पनि जित्न नेकपाको कमजोर मत खोस्ने र राप्रपालाई रिझाउने ध्याउन्नमा छ । तामाङ जनजाती उम्मेदवार भएको हुनाले जनजातीको सम्पूर्ण मत लिएर जित्ने कांग्रेसको दाबी छ । वडाअध्यक्ष जित्नको लागि दुईठूला पार्टीको चर्काचर्की पर्ने उक्त क्षेत्र यतिबेला सबैको आर्कषणको केन्द्रविन्दु बनेको छ । उसोत मतदातालाई मनोवैज्ञानिक असर पार्न उम्मेदवारी दर्ताका दिन नेकपा र कांग्रेसले ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्वमन्त्री रहेका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ, केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा, प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत लगायत नेता उम्मेदवारी दर्ता गराउन गत साता गाउँपालिका केन्द्र नवलपुर पुगेका थिए । त्यसपछि नेता कार्यकर्ता सहित उम्मेदवारले घरदैलो अभियान थाल्दै चुनावी प्रचारप्रसारलाई व्यापकता दिएका छन् । चुनावी क्षेत्र वडा नम्बर ८ रहेको ज्यामिरे मानेलाई मुख्य दुईवटै पार्टीले आफ्ना चुनाव चिन्ह अंकित ध्वाजापताङ्गले झकिझकाउ बनाएका छन् ।
चुनावी खर्च चन्दा र पार्टीको भरमा
वडा नम्बर ८ का लागि उपनिर्वाचनमा भिडेका नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार आचार्य र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार तामाङ दुवै स्थानीय हुन् । उनीहरु दुवै पार्टी र जनतामाझ ईमान्दार मानिन्छन् । तर दुवैसंग चुनावी खर्च जुटाउने सामर्थ छैन । खर्च विनानै चुनाव भिड्न लागेका नेकपाका उम्मेदवार आचार्यले जनताको मन जितेर चुनाव जिती छाड्ने प्रतिक्रिया दिए । ’जनताको जनमत हुनेलाई पैसाको जरुरत पर्दैन, विना खर्च नै चुनाव जित्नेछु‘, आचार्यले दावीका साथ भने । चुनावको लागि खर्च गर्ने आफु संग पैसा नभएको र पार्टीले समेत दिन नसकेको उनको भनाई छ । आचार्यको जस्तै तर्क अर्का उम्मेदवार तामाङको पनि छ । उनले पनि चुनावको लागि भनेर व्यक्तिगत खर्च नगर्ने बताए । ’चुनावी प्रचारप्रसारमा हिड्नेहरुका लागि चिया, खाजा र खाना बाहेक अरु खर्च नगर्ने मनस्थितिमा छु‘, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तामाङले भने । पार्टीले चुनाव खर्च भनेर ५ देखि १० लाख सम्म दिने भनेर आश्वासन दिएको उनले बताए ।
This entry was posted in स्थानीय तह, समाचार. Bookmark the permalink.
गठबन्धनमा यसरी टुंगियो मन्त्रालय भागवण्डा, भोलि ४ बजे मन्त्रीहरुको शपथ
ईटकाे जवाफ पत्थरले दिन तयार हाै – प्रचण्ड
गैरलाभग्राहीमा परेको गुनासोकर्तालाई भाद्र १५ सम्म जानकारी पत्र बुझ्न प्राधिकरणको आग्रह
जुगलमा महामारी हुन नदिन टोल फ्री